Myanmar has agreed to the appointment of H.E. Mr. Wouter Robert Marie Jurgens as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of the Netherlands to the Republic of the Union of Myanmar with residence in Yangon – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Myanmar has agreed to the appointment of H.E. Mr. Wouter Robert Marie Jurgens as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of the Netherlands to the Republic of the Union of Myanmar with residence in Yangon
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the appointment of H.E. Mr. Wouter Robert Marie Jurgens as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of the Netherlands to the Republic of the Union of Myanmar with residence in Yangon.
Mr. Wouter Robert Marie Jurgen was born in Doetinchem, the Netherlands, on 18th June 1971. He obtained Bachelor of Business Administration in 1992, Master of Political Science and Master of Economics in 1997. He joined the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands in 1997 and served in various capacities at the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands as well as Royal Netherlands Embassies in Kigali, Rwanda, Washington DC, United States and Pretoria, South Africa. He also served as Senior Policy Analyst seconded to the US Department of State, Washington DC from February to June in 2005. Then, he served as Head of Counter Terrorism, Organized Crime and Cyber Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands from 2012 to 2013. Since 2013, he has been serving as Head of Task Force International Cyber Policies of the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands. He is married and has three children.
Dated: 4th March 2016
မစ္စတာ ဝေါ်တာ ရောဘတ် မာရီ ဂျာဂန် အား ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော နယ်သာလန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ရန် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရက သဘောတူညီပြီးဖြစ်ပါသည်။
မစ္စတာ ဝေါ်တာ ရောဘတ် မာရီ ဂျာဂန် ကို ၁၉၇၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၈ ရက် နေ့တွင် နယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ ဒိုတင်ဆမ်မြို့၌ မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှုဝိဇ္ဇာဘွဲ့၊ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံရေးသိပ္ပံမဟာဘွဲ့နှင့် စီးပွားရေးသိပ္ပံမဟာဘွဲ့များ ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် နယ်သာလန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ စတင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး နယ်သာလန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ရဝမ်ဒါနိုင်ငံ၊ ကီဂါလီမြို့၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဝါရှင်တန် ဒီစီမြို့ နှင့် တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ၊ ပရီတိုးရီးယားမြို့ တို့ရှိ နယ်သာလန်သံရုံးအသီးသီးတွင် ရာထူးအဆင့်ဆင့်ဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလမှ ဇွန်လအထိ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့၊ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနတွင်တွဲဖက်၍ အကြီးတန်းမူဝါဒရေးရာ လေ့လာသူအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ယင်းနောက် နယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆိုက်ဘာရေးရာ၊ ပြစ်မှုရေးရာနှင့် အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေးဦးစီးဌာနအကြီးအကဲအဖြစ် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ ယနေ့အထိ၊ နိုင်ငံတကာဆိုက်ဘာရေးရာ မူဝါဒလုပ်ငန်းအဖွဲ့ အကြီးအကဲအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ဝေါ်တာ ရောဘတ် မာရီ ဂျာဂန် သည် အိမ်ထောင်သည် တစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ သားသမီး (၃)ဦးရှိပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၊ မတ်လ ၄ ရက်